5 တွင် သင့်ကားအတွက် အကောင်းဆုံး ဘေးကင်းရေး အင်္ဂါရပ် ၅ ခု - Clickfor.net | ဧည့်သည်ဘလော့ | ဧည့်သည်ဘလော့ကို တင်ပါ။
434 Views စာ
သင်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးယာဉ်မောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း လမ်းပေါ်ရှိအခြားသူများ မည်သို့ပြုမူမည်ကို သင်အမြဲတမ်း ခန့်မှန်း၍မရပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သင်သမ်းဝေနေသည့်အချိန်တွင် သင့်အား အရှိန်မြှင့်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သင်သမ်းဝေလာချိန်တွင် ရုတ်တရက် ဘရိတ်အုပ်သွားနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာသောအခါ၊ သင့်ယာဉ်၏ဘေးကင်းရေးအင်္ဂါရပ်များသည် သင့်အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီကားအများစုတွင်... ဆက်ဖတ်ရန်
ဘာသာပြန်ဆိုချက်သည် မီနာဒေသတွင် သင့်လုပ်ငန်းကြီးထွားလာစေရန် ကူညီပေးနိုင်သည်
သင်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးယာဉ်မောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း လမ်းပေါ်ရှိအခြားသူများ မည်သို့ပြုမူမည်ကို သင်အမြဲတမ်း ခန့်မှန်း၍မရပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သင်သမ်းဝေနေသည့်အချိန်တွင် သင့်အား အရှိန်မြှင့်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သင်သမ်းဝေလာချိန်တွင် ရုတ်တရက် ဘရိတ်အုပ်သွားနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာသောအခါ၊ သင့်ယာဉ်၏ဘေးကင်းရေးအင်္ဂါရပ်များသည် သင့်အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ခေတ်မီကားအများစုတွင် လမ်းပေါ်တွင် သင်၏အတွေ့အကြုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော လုံခြုံရေးစနစ်များစွာရှိသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ ၎င်းတို့သည် သင်၏လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး သင့်အာမခံအတွက် သင်မည်မျှပေးချေနိုင်သည်။
ဤသည်မှာ 2022 ခုနှစ်တွင် စောင့်ကြည့်ရန် အကောင်းဆုံး ဘေးကင်းရေး အင်္ဂါရပ်ငါးခုဖြစ်သည်။
1. အလိုအလျောက် ဘရိတ်စနစ်များ
အကောင်းဆုံး မော်တော်ယာဥ်ဘေးကင်းမှုအတွက် ထားရှိရန် အကောင်းဆုံး 2022 ကားအင်္ဂါရပ်များထဲမှ တစ်ခုသည် အလိုအလျောက် ဘရိတ်စနစ်ဖြစ်သည်။ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်နိုင်ချေကို တွေ့ရှိပါက သင့်ကားသည် အလိုအလျောက်နှေးကွေးခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးတွင် တုံ့ပြန်မှုနှေးကွေးသည့်အချိန် သို့မဟုတ် အတားအဆီးတစ်ခုကို သတိမထားမိပါက ၎င်းသည် အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား လမ်းပေါ်တွင် ခန့်မှန်းမရသော ယာဉ်မောင်းများမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အထူးသဖြင့် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင် နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင် ကြာမြင့်စွာမောင်းနှင်နေချိန်တွင် နိုးကြားနေရန် ခက်ခဲသည်။ ထိုနေရာတွင် လမ်းသွား-ထွက်ခွာသတိပေးချက် ဝင်လာသည်။
သင့်ကားသည် စတင် လွင့်နေပါက၊ ဤသတိပေးချက်သည် သင့်အား နှိုးဆွနိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်သည်။ အချို့သောစနစ်များသည် သင်၏ cruise control နှင့်အတူ သင့်အတွက် သင့်ယာဉ်ကို ပြန်လည်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
မောင်းသူမဲ့ကားတွေ မဖြစ်ခင်က Cruise Control ရှိတယ်။ ၎င်း၏ဗဟိုတွင်၊ ခရုစ်ထိန်းချုပ်မှုသည် သင့်ယာဉ်အား လမ်းပေါ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အမြန်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်၊ အသစ်သောစနစ်များသည် သင့်ရှေ့မှ အခြားယာဉ်များအတိုင်း သင့်အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိနိုင်စေရန် သင်၏ Cruise Control ကို ခွင့်ပြုပေးပါသည်။
သင့်ရှေ့တွင် ကားတစ်စီး ရုတ်တရက် အရှိန်လျှော့သွားပါက၊ သင့်ကားသည် တုံ့ပြန်မှုဖြင့် နှေးကွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဂရုတစိုက်မောင်းနှင်မှုနှင့်အတူ cruise control ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပိုလုံခြုံသောမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံ.
4. Blind-Spot စောင့်ကြည့်ရေး
ကားလုံခြုံရေးအတွက် အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်မှာ blind-spot စနစ်ဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုဒေတာ သို့မဟုတ် ရေဒါတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ သင့်စနစ်သည် ယာဉ်များ သို့မဟုတ် လူများထံ ချဉ်းကပ်လာမှုကို ထောက်လှမ်းသည်။ ယာဉ်သည် အတားအဆီးကို ရှောင်ရှားနိုင်စေရန် ယာဉ်မောင်းအား သတိပေးရန် ဘီပီ သို့မဟုတ် အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ အချက်အချို့ကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
SUV သို့မဟုတ် မီနီဗန်များကဲ့သို့ ပိုကြီးသောကားများသည် ပိုကြီးသော ကန်းကွက်များ ပါရှိခြင်းကြောင့် ဤအင်္ဂါရပ်မှ အကျိုးအများဆုံး ရရှိပါသည်။
5. Facial Recognition ဆော့ဖ်ဝဲ
Facial recognition ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ကား၏လည်ပတ်ပုံကို ဆုံးဖြတ်ရန် မျက်နှာအင်္ဂါရပ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယာဉ်မောင်းသည် ငိုက်မျဉ်းခြင်းရှိမရှိ သို့မဟုတ် အချို့သောလမ်းကြောင်းသည် မှားယွင်းသောမျက်လုံးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေခြင်းရှိမရှိ သိရှိနိုင်သည်။
ကားသည် ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံသို့ ဝင်သောအခါတွင် သင့်စိတ်ကြိုက် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနကို ဖွင့်နိုင်စေရန် ၎င်းကိုပင် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ သင့်ထံမှ အကောင်းဆုံး အသံစနစ်အား ဝယ်ယူထားကြောင်း သေချာပါစေ။ ds18.com အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်။
အကောင်းဆုံး ဘေးကင်းရေး အင်္ဂါရပ်များကို ရယူပါ။
ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစနစ်များသည် ခရီးရှည်သွားသော တစ်ကိုယ်တော်ယာဉ်မောင်းဖြစ်စေ သင့်တွင် ကလေးများရှိသည်ဖြစ်စေ သတိပြုရန် အရေးကြီးသော အရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ကားတွင် မည်သို့သော ဘေးကင်းရေး အင်္ဂါရပ်များ ပါ၀င်ကြောင်းနှင့် မည်ကဲ့သို့ ထည့်နိုင်သည်ဆိုသည်ကို သင့်ပြည်တွင်း ကားအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကို မေးပါ။
နည်းပညာနှင့် မော်တော်ယာဥ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန် စိတ်ဝင်စားပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြားဆက်စပ်ဆောင်းပါးများကို ကြည့်ရှုပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏ မယုံကြည်နိုင်လောက်သော အကျိုးကျေးဇူး ၅